Cuntooyinka Laga Qaado Kansarka - Daryeel Magazine
2. Cuntooyinka Shiilan: Cunista cuntooyinka shiilani waxa ay halis ku yihiin guud ahaan caafimaadka qofka, waxa aanay kor u qaadaan khatarta ah in qofka uu ku dhaco cudurka Kansarka, sababtuna waa maadadda Acrylamide oo ku dhalata cuntada, oo kor u qaadda heerka khatarta ah in qofka uu Kansar ku dhaco. Cuntooyinkan waxaa ka mid ah baradhada shiilan ee bacaha lagu keeno ee loo yaqaan “chips” ta.
8. Tamaandhada qasacadaysan: In kasta oo ay tamaandhadu (yaanyadu) ka mid tahay cuntooyinka kansarka la dagaalama, maadaama oo uu ku jiro xaddi aad u badan oo ah maaddooyinka mariidka la dagaalama. Haddana cilmibaadhisaha dheeraadka ah ee lagu sameeyey tamaandhada qasacadaysan ayaa muujinaya in ay caddahay in ay sabab u noqon karto noocyo ka mid ah kansarka, sababtuna ay tahay maadadda Kiimikaad ee Bisphenol A oo ay warshaduhu u adeegsadaan ilaalinta cuntooyinka qasacadaysan si aanay u xumaan. Maadadda Bisphenol A waxa ay kor u qaaddaa khatarta ah in qofka uu ku dhaco cudurka kansarka noocyadiisak u dhaca naaska iyo qanjidhka ragannimada ee ragga.
Waxa kale oo ay maadaddani keentaa ma dhalaysnimo, qaangaadh waqtigiisa ka soo horumara iyo khalkhal ku dhaca dheefsashada cuntada, iyada sida oo kale cudurka macaanka noociisa labaad.
9. Subaga la dhallaan rogay:
Subaggan oo ereygan aynu u isticmaalnay aanu ahayn mid cilmiya waxa uu samaysmaa marka ay shirkaduhu saliidda dareeraha ah u rogaan subag adke ah, kadibna ay ku daraan wax-soo-saarkooda qaar, iyaga oo uga dan leh in uu raajiyo cimriga jiritaanka cuntada ay sameeyeen, sidoo kalana dhadhankeeda ka dhigta mid sugan. Sida Jibiska warshadaysan, keegagga, cuntooyinka fudud sida Beergarrada, busbaaska warshadaysan, cuntooyinka la shiilo, iyo inta badan ee macmacaannada kala duwan.
Waxa ay khubaradu si aad ah uga digayaan in la isticmaalo cuntooyinka uu ku jiro subaggan la fadhiisiyey oo inta badan loo qoro Trans Fat ama hydrogenated oil, iyaga oo sheegay in uu keeno cudurka kansarka. Sidoo kale waxa ay shirkadaha qaar u qoraan saliiddan PHOs oo aad ka helayso dusha sare ee kartoonka ama qasacadda halka uu ku qoran yahay macluumaadku.
1. Saloolka (Daangada):
Bare-sare Etan Ivanov oo shahaadada sare ee PhD da haysta, madaxna ka ah xarunta Lautenberg ee cilmibaadhista ka-hortagga iyo Kansarka, ayaa yidhi, “Saloolka lagu diyaariyo Microwave ka (Mishiinka moofada ah ee korontada ku shaqeeya) waxa uu cabbaa dufanka samayska ah iyo qiiqa ka soo baxaya, kaas oo uu ku dhex jiro isku-dhis sababa kansarka noociisa sambabka ku dhaca” Isku-dhiskan oo lagu naanayso bamka subagga waxa uu saloolka siiyaa dhadhanka gaarka ah iyo urta lagu xiiseeyo.
Dhinaca kalana wakaaladda dhowrista deegaanka ee dalka Maraykanka (United States Environmental Protection Agency) ayaa sheegtay in asiidhka Perfluorooctanoic (PFOA) oo ku jira saloolku uu aad ugu dhow yahay in uu sababo Kansar.
Cuntooyinka Sababa Cudurka Kansarka Ee ay Tahay Inaad Ka Fogaato Xanuunada Iyo Dhibaatooyinka Laga Qaado Hurdo Yaraanta Liin Dhanaanta Oo Dawo Ka Ah Buurnida Iyo Xanuunada Laga Qaado Cudurrada Cusub Ee Laga Qaado Taleefoonnada Casriga Ah Iyo Internet-ka